Ungawaphuhlisa njani amangeniso aleger ngokubanzi
Ngenxa yokuba ukuthengiselana ngeshishini lakho kugcinwa kuqala kwiijenali, uphuhlisa uninzi lwamangeniso eGenerger esekwe kulwazi olufunyenwe kwiphephancwadi elifanelekileyo.
Umzekelo, iirisithi eziyimali kunye neeakhawunti ezichaphazeleka zezo risithi zidwelisiwe kwijenali yeRisithi yeMali. Inkcitho yemali kunye neeakhawunti ezichaphazelweyo zezi zidwelisiweyo zidwelisiwe kwijenali yeeNtlawulo zeMali. Kukwanjalo nakwezentengiselwano ezifumaneka kwijenali yokuThengisa, Ijenali yokuthenga, Ijenali ngokubanzi, kunye nezinye iijenali ezizodwa onokuthi uzisebenzise.
Ekupheleni kwenyanga nganye, shwankathela iphephancwadi ngalinye ngokudibanisa iikholamu kwaye usebenzise eso sishwankathelo ukuphuhlisa ukungena kwi-General Ledger. Oku kuthatha ixesha elincinci kakhulu kunokungena kuyo yonke intengiselwano kwiGeneral Ledger.
Iimali ezifunyanwa kwiijenali ezifunyanwa ziiCash
Ijenali yeeRisithi eziMali ilandelela ukuthengiselana apho ishishini lifumana imali ezinkozo. Kolu ngeniso lulandelayo lweLedger, qaphela ukuba imali kunye neekhredithi zikulungelelwano, kwi- $ 2,900 inye. Onke amangeniso kwiGeneral Ledger kufuneka abhalise ngokuchanekileyo. Lowo ngumthetho ophambili wokugcinwa kweencwadi ezimbini.
Imali $ 2,900
Ii-akhawunti zamkelekile $ 500 yeedola
Intengiso $ 900
Inkunzi $ 1,500
Kolu ngeno, iakhawunti yeCash inyuswe nge-2,900 yeedola ukubonisa ukuba imali ifunyenwe. Iakhawunti eFumanekayo yeakhawunti yehlisiwe ngama-500 eedola ukubonisa ukuba abathengi bawahlawule amatyala abo, kwaye nemali leyo ayisasebenzi. Iakhawunti yokuThengisa inyuswe nge-900 yeedola, kuba imali eyongezelelweyo yaqokelelwa. Iakhawunti eyiNkunzi inyuswe nge-1,500 yeedola kuba umnini ubeke imali eninzi kwishishini.
Ungeniso lwephepha lokuhlawula imali
Ijenali yokuhlawula imali igcina umkhondo wayo yonke imicimbi yemali ebandakanya imali ethunyelwe ngaphandle kweshishini. Lo mzobo ungezantsi ubonisa indlela yokushwankathela ezo ntengiselwano ukuze zithunyelwe kwi-General Ledger. Olu ngeniso lulandelayo lweLedger lusekwe kwimicimbi ethengisanayo evela kwijenali yeeNkxaso zeMali kulo mzobo.
Qesha $ 800
Ii-akhawunti Ezibhatalekayo $ 750 ezixabisekileyo
Imivuzo $ 350 yeedola
Ikhadi letyala lihlawulwa $ 150
Imali I $ 2,050
Ijenali eshwankathelweyo yokuBuyiselwa kwemali.
Isishwankathelo seLedger General silinganisela kwi- $ 2,050 nganye kwi-debits kunye neekhredithi. Iakhawunti yeCash iyancitshiswa ukubonisa ukuhlawulwa kwemali, iRhafu kunye neMali yemivuzo iyonyuswa ukubonisa iindleko ezongezelelweyo, kwaye iiakhawunti ezihlawulekayo kunye neKhadi letyala ezihlawulwayo zihlawulwa ukubonisa ukuba amatyala ahlawulwe kwaye awasafuneki.
Ungeniso lwejenali yokuthengisa
Ijenali yokuthengisa igcina umkhondo wazo zonke iintengiselwano zentengiso. Lo mzobo ungezantsi ubonisa indlela yokushwankathela ezo ntengiselwano ukuze zithunyelwe kwi-General Ledger. Olu ngeniso lulandelayo lweLedger lusekwe kwimicimbi ethengiswayo evela kwiJenali yokuthengisa kulo mzobo.
Ii-akhawunti zamkelekile $ 800
Intengiso $ 800
Ijenali eshwankathela intengiso.
Qaphela ukuba olu ngeno lungelelene. Iiakhawunti eziFunyanwa ziiakhawunti zonyuswa ukubonisa ukuba abathengi banetyala kwishishini kuba bathenge izinto kwikhredithi yevenkile. Iakhawunti yokuThengisa inyuswe ukubonisa ukuba nangona kungekho mali itshintshileyo, ishishini lithathe ingeniso. Imali iya kuqokelelwa xa abathengi behlawula amatyala abo.
Ukuthenga ungeniso lwejenali
Ijenali yokuthenga igcina umkhondo wazo zonke izinto ezithengiweyo. Lo mzobo ungezantsi ubonisa indlela yokushwankathela ezo ntengiselwano ukuze zithunyelwe kwi-General Ledger. Olu ngeniso lulandelayo lweLedger lusekwe kwimicimbi ethengisanayo evela kwincwadi yokuThenga kumzobo.
Ukuthenga $ 925
Ii-akhawunti Ezibhatalekayo $ 925
Ijenali eshwankathela intengo.
Njengongeno lweakhawunti yeNtengiso, olu ngeno lungelelene. Iakhawunti Ehlawulekayo iAkhawunti inyuswe ukubonisa ukuba imali ibangelwe ngabathengisi, kwaye iakhawunti yeendleko zokuThengiweyo inyuswe ukubonisa ukuba ezinye izinto zithengiwe.
Ungeniso lwejenali ngokubanzi
Ijenali ngokubanzi igcina umkhondo wayo yonke intengiselwano eyahlukeneyo engalandelwanga kwincwadi ethile, enje ngejenali yokuThengisa okanye ijenali yokuThenga. Lo mzobo ungezantsi ubonisa indlela yokushwankathela ezo ntengiselwano ukuze zithunyelwe kwi-General Ledger. Olu ngeniso lulandelayo lweLedger lusekwe kwimicimbi evelayo kwiJenali jikelele kulo mzobo.
Ukubuya kweNtengiso $ 60
Ii-akhawunti Ezibhatalekayo $ 200
Izithuthi $ 10,000
Ii-akhawunti zamkelekile $ 60
Ukubuya kweNtengo $ 200
Inkunzi $ 10,000
Ijenali jikelele eshwankathelweyo.
Ukujonga ibhalansi -Amatyala kunye neekhredithi zombini zizonke zi- $ 10,260. Kolu ngeno, iiakhawunti zokuBuyiswa kweNtengiso kunye neNtengo yokuBuyisa ziyandiswa ukubonisa imbuyekezo eyongezelelweyo. Iiakhawunti ezihlawulwayo kunye neeAkhawunti eziFumanekayo iiakhawunti ziye zancitshiswa zombini ukubonisa ukuba imali ayisasebenzi. Iakhawunti yeZithuthi inyuswe ukubonisa iiasethi zenkampani entsha, kwaye iakhawunti eyiNkunzi, kulapho kulandelwa khona idipozithi zomnini-shishini, yonyuswa ngokufanelekileyo.
iindleko ze-humira nge-inshurensi
i-motrin iyafana ne-advil
Ngaba ungasebenzisa i-ketamine ngaphezulu
tramadol kunye ne-ibuprofen kunye